Shirweynaha Afaraad ee Xiriirka Shatarajiga Soomaaliya oo dib loogu doortay Guddoomiyihii hore + Sawirro | Somchess.net
You are here : Somchess.net » Sawirada » Shirweynaha Afaraad ee Xiriirka Shatarajiga Soomaaliya oo dib loogu doortay Guddoomiyihii hore + Sawirro
Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shirweynihiisii afaraad, iyadoo halkaasina ay ka dhacday tartanka Guddoomiyaha Xiriirka iyo xubnaha kale ee ka tirsan Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya.
Guddiga Doorashada Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed oo isagu guddoominayay shirweynaha ayaa madasha shirka ka sheegay in laba xubnood ay ku tartamayaan jagada Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga kuwaasi oo magacyadooda ay kala yihiin: Axmed Cabdi Xasan (Wataac) iyo nin lagu magacaabo Cukaash.
Ugu horeyntii Musharax Cukaash ayaa sheegay inuu isagu u tanasulay Axmed Cabdi Xasan Wataac oo horay u ahaa Guddoomiyaha Xiriirka, iyadoo kaddib markaasina ay u codeeyeen kooxaha Shataranjiga oo ay iyaguna ka qeyb galay shirweynaha afaraad ee Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed.
Guddiga doorashada Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ayaa sheegay in Guddoomiye K/Xigeenka, Xoghayaha guud, iyo xubnaha kale ee Xiriirka aanay jirin cid la tartameysa, sidaasina ay ku sii heynayaan xilka ay uga magacaaban yihiin Xiriirka.
Waxqabadka Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed ayaa halkaasi laga akhriyay, iyadoo Xiriirku suurageliyay in Shataranjiga Soomaaliya uu ka mid noqdo xiriirada heer caalamiga iyo mid qaaradeed kana qeyb galay horyaallada Shataranjiga Adduunka, qaaradda Afrika, Aasiya iyo Xiriirashada Shataranjiga Carabta.
Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ee dib loogu doortay shirweynaha afaraad ee Xiriirka oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho Axmed Cabdi Xasan Wataac ayaa khudbad dheer u jeediyay ka qeyb galayaasha shirweynaha.
Waxa uu sheegay Guddoomiye Wataac in hirgelinta Shataranjiga Soomaaliya ay ka soo mareen dhibaatooyin fara badan, isagoona sheegay inay dalka ku fidiyeen barashada iyo ciyaarta Shataranjiga ama Chess-ka loo yaqaano.
“Maanta waan jeclaan lahaa in qof dhallinyaro ah isla markaana leh khibrad iyo waaya aragnimo inuu igala wareego xilka” ayuu yiri Guddoomiye Wataac oo ku booriyay kooxaha inay kor u qaadaan ciyaarta Shataranjiga oo uu sheegay inay soo saaraan ciyaartooy ka qeyb gala tartamada caalamiga ah.
Dhinaca kale waxa uu sheegay Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Wataac in isaga qudhiisa, kooxaha Shataranjiga ay suurageliyeen inay caalamka gaarsiiyaan waxqabadka Xiriirka.
Qaar ka mid ah kooxaha ka qeyb galay shirweynaha afaraad ee Xiriirka Shataranjiga Shataranjiga Soomaaliya oo halkaasi khudbado gaagaaban ka jeediyay ayaa ugu hambalyeeyay Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya inuu xilkiisa Alle la garab galo, iyagoona ka dalbaday Guddoomiyaha dib loo doortay inuu la yimaado waxqabad cadcad oo ka duwan marxaladihii uu soo maray Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya.
« Somali FA unveils 2013 league A start date
UN welcomes use of sports as a peace building tool in Somalia »